Ukwenza Okuninzi kwindlela yokwenza imali | Martech Zone
Lwesine, Matshi 20, 2008 NgoLwesithathu, nge-4 kaJanuwari 2017 Douglas Karr
Ukwenza imali ngebhlog kunzima ngaphandle kokuba uninzi lwezithuthi okanye ukuba une-niche enkulu. Ndiqhuba iitekhnoloji ezimbalwa zentengiso kwindawo yam kwaye ndichukumisekile yingeniso endiyifumeneyo. Omnye wemicimbi yokuqhuba indawo yentengiso kukufumana okuninzi kwizindlu nomhlaba. Ngaba uqhuba ukubonisa iintengiso? Izitshisi? Amaqhosha? Amakhonkco okubhaliweyo?
Ndiyakholelwa ukuba olu luvo olungemva kwemizamo emitsha enje Iprojekthi yeRubicon (ethe yonyusa ingeniso yam kwintengiso-ngokucofa intengiso kathathu kwibhlog yam). Inkqubo yabo ijonga ukusebenza kwiintengiso kwaye iguqula intengiso eboniswe apho ngokufanelekileyo.
Qaphela apho ndithathe isigqibo 'sokudlala' kwaye ndenze ezam izindululo… ayilunganga:
Isizukulwana esilandelayo sokwenza imali
Okulandelayo kwiwebhu zizicelo eziya kuvumela umshicileli kunye nomthengisi ngokupheleleyo, nangona kunjalo. UmxholoWebhu, Inkampani ehamba phambili yentengiso ibhengeze izolo ukuba bayasungula IDesika yokuThengisa yeArhente yokuThengisa. Nasi isiphako esivela kuKhutshwa kwabo kweNgcaciso:
Iiarhente zijongana nemicimbi ecel'umngeni kwinkcitho yemithombo yeendaba esebenzayo kunye nokufikelela kulwazi olunokwenzeka ngexesha lokuqhekeka kwabaphulaphuli. Baza kusebenzisa i- IDesika yokuThengisa yeArhente yokuThengisa ukunxulumanisa intsebenzo nomxholo kuyo yonke inkcitho yemithombo yeendaba yedijithali. Sebenzisa i-injini yemeko efanayo yexesha lokwenyani egunyazisa ishishini losasazo lenkampani, iarhente yedijithali inokusebenzisa i-ADSDAQ yokuTshintshiselana ngeArhente yokuThengiswa kweDesika ekuthengeni kwii-portals, iinethiwekhi zentengiso kunye nokuthenga okuthe ngqo kwindawo ekuhlalwa kuyo kuthengwe kumacandelo omxholo kunye nokudibanisa ukusebenza kwephulo kunye nezo ndidi . Inkonzo isebenza ngokwahlukeneyo kwishishini leendaba lenkampani.
Nje ukuba umthengi okanye umhlalutyi alufumane olu hlalutyo, iarhente iyakwazi??
Nge-ADSDAQ (ayikaphunyezwa kwibhlog yam okwangoku), ndinokusetha ixabiso elincinci lokuthengiswa kwam kwezindlu nomhlaba KODWA ndikhonze ezinye iintengiso ukuba akukho mntu uthatha isigqibo sokuthenga. Enjani yona ingcamango!
Ngamanye amagama, ukuba nditsho ukuba iqhosha lasekhohlo lixabisa i-150 yeedola, uMkhangisi kwi-ADSDAQ unokufumana indawo kwaye ahlawule ixabiso. Nangona kunjalo, ukuba akukho mntu ulumayo, ndingabonisa enye intengiso apho. Ukrelekrele kakhulu. Ngoku uthatha isigqibo sokuba ifanelekile na into yokuthengiswa kwezindlu! Ndizakumba kule nzulu kwaye ndiyathemba ukuba ndiza kuzama ngenene kwiinyanga ezizayo nge-ADSDAQ. Elona candelo likhulu kukuba akufuneki ndibashiye abantu endibasebenzisayo ngoku!
Inqaku kuYahoo! Ishishini
Mar 20, 2008 ngo 2:04 PM
Enkosi ngeentloko phezulu - ndindwendwele nje kwaye ndasayina. Ndisaqhubeka nendlela endiza kuyigqiba ngayo yonke ingeniso yam yentengiso kuzo zonke iisayithi zam… oku kunokuba luncedo.
I-JT- Iprojekthi yeRubicon
Mar 23, 2008 ngo 4:19 PM
UDouglas- enkosi ngeposi! Ndinoxanduva lwenkqubo yomshicileli kwiProjekthi yeRubicon. Ndonwabile ukuva ngamava akho amnandi ngenkqubo yethu. Iqela lethu lisebenze nzima kakhulu ukunceda abapapashi abafana nawe benza imali eninzi kwiintengiso ezikwi-site yakho ngelixa usenza umsebenzi omncinci.
Ngokuqinisekileyo sigcine siposelwe kwingxelo yakho.
Mar 23, 2008 ngo 6:32 PM
Enkosi ngokuma, JT.
I-Rubicon ayidlalanga kakuhle nge-ADSDAQ ke kuye kwafuneka nditsale loo ndlela. Iintengiso zibonisiwe kodwa akukho nqakrazo ibonakala ukubhalisa kwiRubicon. Asinakuba nayo loo nto! Ndicinga ukuba bendinokuthi 'ndiyifakile' ngokukhupha iphepha ngokusebenzisa iframe, kodwa yinto encinci yokuqhekeka.
Ndilahle inqaku lokuxhasa ngokuhlwanje. Enye i-kudos kwinkonzo yabathengi-nina niyamangalisa.
Mar 25, 2008 ngo-12: 54 AM
Yindlela entle yokwenyani le posi ukuze sabelane ngayo. Iimveliso zilunge kakhulu ukuba ziyinyani kwaye ndiyathemba ukuba abantu abaninzi baya kuyibhalisela.
Kum, ndiza kuyenza kwakamsinya.